Nhau - Coronavirus denda inokonzeresa kutumira mudziyo dambudziko
Coronavirus denda inokonzeresa kutumira mudziyo dambudziko
Chero ani zvake anoda kutumira chinhu chakakura - kana chakakura chimwe chinhu chidiki - anorenda izvo zvinozivikanwa semudziyo wepakati pechinangwa. Asi iro harisi basa riri nyore panguva ino - hapana zviripo zvakakwana mabhokisi ekufambisa anowanikwa. Kutenga mudziyo hakusi nyore zvakare.
Pepanhau reGerman rezuva nezuva reFrankfurter Allgemeine Zeitung nguva pfupi yadarika rakataura kuti kune makambani maviri chete pasi pano anovaka nekutengesa midziyo yekutakura - ese ari muChina.
Chero ani muEuropean ari kutsvaga kutenga imwe anogona kungozviwana zvechipiri: Kunyange midziyo mitsva inotanga kutakurwa nezvinhu muChina uye inoshandiswa pakutakura kamwe chete isati yatorwa kuti ive ino.
Nei mitengo yekutumira iri kukwira?
Mari yekubhadhara uye kutumira yakakwira zvakare. Pamberi pa2020, kutakura akajairwa 40-tsoka (12-mita) muchikepe ichifamba kubva pachiteshi cheChinese chinodhura madhora chiuru (€ 840) - parizvino, munhu anofanirwa kubhadhara kusvika $ 10,000.
Kukwira kwemitengo kunogara kuri chiratidzo chekusaenzana. Mune ino kesi, icho chiratidzo chekuwedzera kudiwa (kwemidziyo kana nzvimbo yekutumira) ine kudzikira kana kutoderera kupihwa.
Asi kune zvakare kushomeka kwenzvimbo yengarava panguva ino. "Hakuna ngarava dzakachengetwa dzasara," Rolf Habben Jansen, CEO wekambani yezvigadzirwa Hapag-Lloyd, akaudza magazini yevhiki nevhiki yeGerman Der Spiegel.
Varidzi vengarava vakaisa mari shoma mumafiroti avo mumakore achangopfuura, akadaro, “nekuti havana kuwana mari yemari makore mazhinji. Hapana akatarisira kudiwa kukuru kwekutakura zvekufambisa nekuda kwedenda. Hakuzovi nezvimwe zvikepe munguva pfupi. ”
Kunyangwe kushomeka kwenguva pfupi, dambudziko harisi rekusakwana kwenhamba dzemabhokisi matsva chete. Midziyo haimbofi yakamboshandiswa kune imwechete-nguva yekufambisa uye panzvimbo pechikamu chepasi rose system.
Pakangoti mudziyo wakaremerwa nematoyi eChinese, semuenzaniso, waburutswa pachiteshi cheEuropean, unozadzwa nezvinhu zvitsva uye ungazotakura zvikamu zvemuchina weGerman kuenda kuAsia kana kuNorth America.
Asi kwegore ikozvino, zvave zvakaoma kuchengetedza nguva dzepasirese dzinodzora kutakura kwepasi rose, sezvo denda re COVID-19, iro rakatanga kutanga kwa2020, richienderera mberi nekukanganisa kutengeserana kwepasirese.
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Rakajeka, Floor Furo Rakajeka, Floor Mat Puzzle, Floor Puzzle Mat Cushion, Yepasi Yekunze Exercise Mat, Zvese Zvigadzirwa